समता शिक्षा निकेतन स्कूल, पाल्पा (संस्था परिचय) - Sero Fero News
समता शिक्षा निकेतन स्कूल, पाल्पा (संस्था परिचय)
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - ४ बैशाख २०७९, आइतवार
समता स्कूल काठमाडौमा उत्तम संजेलले २००१ मा स्थापना गरेका हुन्। मासिक १०० रू($1) फिस लिएर गरिब र धनि अर्थात सरकारी र बोर्डिगं स्कूलको खाडल भर्ने उद्देश्यले यो स्कूल खोलिएको हो। यसको प्रमुख उद्देश्य असाहाय, घरबार बिहिन, सडकका गरिब केटाकेटीहरूले पनि गुणस्तरिय शिक्षा पाउन भन्ने हो । हाल बिध्यार्थिको संख्या बढेर बिध्यालयले धान्न सकिरहेको छैन । बिभिन्न जिल्लाहरूमा समेत यसको शाखा माग भए बमोजिम करिब २२-२५ शाखाहरू खोलिदै छ । समता कलेज र अस्पताल समेत संचालनमा छ ।
यो मानविय समाजसेवा काम मन पराएर बिदेश समेत यसको माग भै भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थाइलेन्डमा समेत खोलिएको छ ! यो सर्बोकृष्ट मानव सेवाको लागि उत्तम संजेलले बिभिन्न अन्तराष्टिय पुरस्कार समेत प्राप्त गरि सक्नु भएको छ ! यसले गुणस्तरले बोर्डिगं स्कूल कै शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चाहना, इच्छा र अठोट भए बासको झुपडीमा ”bamboo school” र थोरै पैसामा पनि गुणस्तरिय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारी र बोर्डिगं दुबै स्कूललाई चुनौतिका साथ प्रमाणित गरिदिएको छ । यसको संचालन देश बिदेशबाट चन्दा र सहयोगबाटै भएको छ । पाल्पामा पनि यसको शाखा करिब ५ बर्ष देखि स्थापना भै सेवा दिईरहेको छ ।
भाडामा स्कूल संचालन र कक्षा कोठाको अभाव, शिक्षकको तलब अभाव, बिध्यार्थिलाई शैक्षिक सामग्रीको अभाब रहेकोछ ! हाल कक्षाकोठाको बिस्तारको लागि उपर्युक्त जग्गा खोज्ने काम भै रहेको छ। यदि कसैले मानविय भावनाले केहि बर्षको लागि निशुल्क, भाडामा वा बेच्न समेत चाहेमा समता स्कूलमा सम्पर्क राख्न अनुरोध छ । पाल्पा शिक्षाको मात्र खानी नभै मनकारीहरूको पनि खानी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने चुनौती हाल पाल्पालीहरू माझ थपिएको छ । हेरौ यो मानविय कार्यमा के कति सामाजिक संघ सस्था, समाजसेबी, राजनैतिक नेतृत्वकर्मी, बुद्दिजिबी र शिक्षाप्रेमीहरूले हात बढाउने छन । समयले प्रमाणीत गर्नेछ ।
देश बिकासको प्रमुख आधार सर्बसुलभ गुणस्तकिय शिक्षा भएको मनन गर्दै पाल्पाली संगम युएसएले पनि यो परोपकारी शैक्षिक संस्थालाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । मनकारी सबैले सक्दो सहयोग गरिदिन हुन सबैमा संग बिनम्र अनुरोध गर्दछौ ! सेवा नै धर्म हो ।
निबेदक समता स्कूल ,पाल्पा पाल्पाली संगम यु एस ए पाल्पाली संगम, काठमाडौ